I-china Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit abakhiqizi nabaphakeli | I-Liming Bio
Le khithi ye-PCR ebucayi, elungele ukusebenziseka iyatholakala ngefomethi ye-lyophilized (inqubo yokumisa okomisa) yokugcina isikhathi eside. Ikhithi ingahanjiswa futhi igcinwe ekamelweni lokushisa futhi izinze unyaka owodwa. Ishubhu ngayinye ye-premix iqukethe wonke ama-reagents adingekayo ekukhuliseni i-PCR, kufaka phakathi i-Reverse-transcriptase, i-Taq polymerase, ama-primers, ama-probes, nama-substrates e-dNTPs. Idinga kuphela ukwengeza amanzi ayi-13ul afakiwe kanye nethempulethi ekhishwe i-RNA engu-5ul, bese ingaqhutshwa futhi ikhuliswe kuzinsimbi ze-PCR.
Umshini we-qPCR kufanele uhlangabezane nalezi zidingo ezilandelayo:
Yiba neziteshi ezingaphezu kwesine zokubona:
Odayi Abalinganiselwe Ngaphambili
FAM, SYBR Okuluhlaza I
7500Real-Time PCR System, Biorad CF96, iCycler iQ ™ Real-Time PCR Detection System, iStratagene Mx3000P, Mx3005P
Ubunzima bokuthuthwa kwamaketanga abandayo weRevelnt Reagent yeNoveli Coronavirus nucleic acid
Lapho ama-reagents ejwayelekile wokuthola i-nucleic acid ethuthwa ebangeni elide, (-20 ± 5) storage isitoreji esibandayo sokuhamba kanye nokuhamba kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi i-enzyme esebenza ngama-reagents ihlala isebenza. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi izinga lokushisa lifinyelela ezingeni, kudingeka amakhilogremu amaningi eqhwa elomile ebhokisini ngalinye le-nucleic acid test reagent noma ngaphansi kuka-50g, kepha lingahlala izinsuku ezimbili noma ezintathu kuphela. Ngokombono wokusebenza kwemboni, isisindo sangempela sama-reagents akhishwe ngabakhiqizi singaphansi kuka-10% (noma sincane kakhulu kunaleli nani) lesitsha. Isisindo esiningi sivela eqhweni elomile, emaphaketheni eqhwa nasemabhokisini amagwebu, ngakho-ke izindleko zokuhamba ziphezulu ngokweqile.
NgoMashi 2020, i-COVID-19 yaqala ukuqhamuka ngesilinganiso esikhulu phesheya, futhi isidingo seNovel Coronavirus nucleic acid reagent reagent sakhula kakhulu. Ngaphandle kwezindleko eziphezulu zokuthekelisa ama-reagents kuketanga elibandayo, iningi labakhiqizi lisengayemukela ngenxa yenani elikhulu nenzuzo ephezulu.
Kodwa-ke, ngokwenziwa ngcono kwezinqubomgomo zikazwelonke zokuthumela ngaphandle kwemikhiqizo elwa nobhadane, kanye nokwenza ngcono ukulawulwa kukazwelonke ngokugeleza kwabantu kanye nezinsiza kusebenza, kukhona ukunwetshwa nokungaqiniseki ngesikhathi sokuthuthwa kwama-reagents, okwaholela ezinkingeni zomkhiqizo ezivelele ngokuhamba. Isikhathi sokuhamba esandisiwe (isikhathi sokuhamba cishe kwesigamu senyanga sivame kakhulu) kuholela ekuhlulekeni komkhiqizo okuvamile lapho umkhiqizo ufinyelela kwiklayenti. Lokhu kukhathaze kakhulu amabhizinisi ama-reagents e-nucleic acid athumela kwamanye amazwe.
Ubuchwepheshe obenziwe nge-Lyophilized for PCR reagent busize ukuthuthwa kwe-Novel Coronavirus nucleic acid detection reagent emhlabeni jikelele
Ama-reagents e-lyophilized PCR angahanjiswa futhi agcinwe ekamelweni lokushisa, elingagcini nje ukunciphisa izindleko zokuhamba, kepha futhi ligweme izinkinga zekhwalithi ezibangelwa inqubo yokuhamba. Ngakho-ke, i-lyophilizing the reagent iyindlela engcono kakhulu yokuxazulula inkinga yokuthuthwa kwempahla kwamanye amazwe.
I-Lyophilization ifaka ukufaka isisombululo esiqandisini sibe sesimweni esiqinile, bese ubeka phansi futhi uhlukanise umusi wamanzi ngaphansi kwesimo se-vacuum. I-solute eyomile ihlala esitsheni enokwakheka okufanayo nomsebenzi. Uma kuqhathaniswa nama-reagents ajwayelekile oketshezi, ingxenye egcwele egcwele i-Novel Coronavirus nucleic acid detage reagent ekhiqizwa yiLiming Bio inezici ezilandelayo:
Ukuqina okukhulu kokushisa: ikwazi ukwelashwa ngokuma kuma-56 ℃ izinsuku ezingama-60, kanti i-morphology nokusebenza kwe-reagent kuhlala kungashintshi.
Isitoreji esijwayelekile sokushisa nokuhamba: asikho isidingo se-chain ebandayo, asikho isidingo sokugcina emazingeni okushisa aphansi ngaphambi kokuvulwa, khipha ngokuphelele indawo yokugcina ebandayo.
Ukulungele ukusetshenziswa: i-lyophilizing yazo zonke izingxenye, asikho isidingo sokumiswa kwesistimu, igwema ukulahleka kwezinto ezine-viscosity ephezulu njenge-enzyme.
Izinhloso ze-Multiplex kuthubhu eyodwa: ilitshe lokuthola lihlanganisa inoveli ye-coronavirus ORF1ab, isakhi sofuzo se-N, isakhi S sokugwema ukwenziwa kwegciwane. Ukuze kuncishiswe okungelona iqiniso, isakhi sofuzo se-RNase P sisetshenziswa njengokulawulwa kwangaphakathi, ukuze kuhlangatshezwane nesidingo somtholampilo sokulawulwa kwekhwalithi yesampula.
Ama-PCR Manuals / ama-MSDS
I-PCR IFU USA EUA
Ishidi lamaqiniso lokunakekelwa kwezempilo
Ama-PCR Amapheshana 3.0
Ishidi lamaqiniso lesiguli
Langaphambilini Ukuhlolwa Okusheshayo Kwe-SARS-CoV-2 IgM / IgG
Olandelayo: Ukuhlolwa Okusheshayo Kwe-SARS-CoV-2
ISars-Cov-2 Rna Real-Time Pcr Kit
ICoronavirus Yokuhlolwa Kwe-Covid-19, IVibrio Cholerae O1 / O139 Ukuhlolwa Okusheshayo Kwe-Antigen Combo, Inoveli Coronavirus Rapid Test Ket, Ikhithi Yokuhlola ye-Igm / Iggrapid, H. Pylori Ag Ukuhlolwa Okusheshayo Kuthola I-Antigen, ICoronavirus Antigen Test Kit,